Oniversiten’i Maninday – Fitakiana vatsim-pianarana: nifamono ny samy mpianatra noho ny tsy fitovian-kevitra | NewsMada
Antsiranana, Ankatso, Vontovorona, Barikadimy Toamasina, Andrianjato Fianarantsoa… Omaly indray, ny tany Maninday Toliara izay ny mpianatra no nifandona noho ny tsy fitovian-kevitra. Tapitra nanao fitokonana ny mpianatry ny oniversite manerana ny Nosy. Fitakiana vatsim-pianarana efa-bolana avokoa ny anton’ny fihestiketsehana.
Tamin’ireo oniversite sasany, fifanandrinan’ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana no niseho ary niafara tamin’ny fisamborana daholo izany. Ny tany Toamasina moa dia nahafatesana mpianatra iray mihitsy ny fifandonana tamin’ny mpitandro filaminana.
Tsy mitovy tamin’ireo kosa ny niseho tany amin’ny oniversiten’i Maninday Toliara. Ireo samy mpianatra indray no nifamono noho ny tsy fitovian-kevitra amin’ny fampitsaharana ny fampianarana. Araka ny vaovao azo avy any an-toerana, omaly, nisy andiana mpianatra nivory, ny alin’ny alarobia hifoha omaly alakamisy ary nanidy ny efitrano fianarana mba tsy hahafan’ny mpianatra mianatra. Tsy ao anatin’ny fikambanan’ny mpianatra izy ireo, araka ny fampitam-baovao ihany. Tezitra noho izany ireo te hanohy fianarana ka raikitra ny korontana izay niafara tamin’ny tora-bato teo amin’ny samy mpianatra, omaly. Vokany, mpianatra roa no naratra. Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandamina ny fifanjevoana teo amin’ireo mpianatra. Taorian’izay, nohidin’ny mpianatra ny vavahady miditra ny oniversite, araka ny vaovao voaray hatrany.
Miitatra ny fitokonan’ny mpianatra…
Miitatra toa sima misioka ity fitokonan’ny mpianatry ny oniversite ity. Ny mahagaga, mitovy tsy misy valaka ny anton’ny fitakiana dia ny famoahana ny vatsim-pianarana efa-bolana. Ny ahina amin’ny tranga tahaka izao dia ny fidiran’ny mpanao politika ao anatiny hampirehitra afo mba hanalorontanana ny filaminana. Ireo mpamono afo loa moa etsy an-daniny manao ny ataony. Mila mandini-tena ny mpianatra mba tsy hataon’izy ireo kilalao ny hoaviny. Anjerimanontolo nidika ho fivelaran’ny fahalalana sy ny fomba fijery hitondrana ny fiainana any aoriana.
CMS sy Andry F.